नेपाल वायु प्रदूषणः काठमाण्डू उपत्यकाको तुवाँलोले ‘फोक्सो र आँखामा पार्न सक्छ गम्भीर प्रभाव’, जोगिने उपाय यस्ता – Himshikharnews.com
नेपाल वायु प्रदूषणः काठमाण्डू उपत्यकाको तुवाँलोले ‘फोक्सो र आँखामा पार्न सक्छ गम्भीर प्रभाव’, जोगिने उपाय यस्ता
१६ चैत्र २०७७, सोमबार १८:५३
केही दिनदेखि उपत्यकामा बढिरहेको वायु प्रदूषणको मात्रा शुक्रवार एकाएक उच्च तहमा पुगेको थियो। शनिवार पनि उपत्यकाको आकाशलाई तुवाँलोले ढाकेको छ।
उपत्यकामा यस्तो अवस्था अझै केही दिन रहन सक्ने जल तथा मौसम विज्ञान विभागको पूर्वानुमान छ।
चिकित्सकहरूका भनाइमा अहिलेको जस्तो वायु प्रदूषणले विशेषतः मानिसको फोक्सो र आँखामा सङ्क्रमण हुनसक्छ।
त्यसबाट बच्न विभिन्न उपायहरू अवलम्बन गर्न चिकित्सकहरूले सुझाव दिएका छन्।
कसरी बढ्यो वायु प्रदूषण?
अधिकारीहरूका अनुसार उपत्यकाभित्र आकाशै ढाक्नेगरी तुवाँलो लाग्नुका विभिन्न कारणहरू छन्।
एउटा कारण यस पटक हिउँदमा वर्षा नहुनु र वायुमण्डलमा धुवाँ तथा धूलोको मात्रा बढी हुनु भएको वातावरण विभागको प्रदूषण नियमन तथा नियन्त्रण शाखाका प्रमुख शङ्करप्रसाद पौडेलले बताए।
तुवाँलो लाग्नुका अन्य कारणबारे उनले भने, “चैतको हावाहुरी चल्ने समयमा काठमाण्डूमा हावा ठप्पजस्तो बसेको छ। पछिल्लो समय तराईतिर लागेको डढेलोबाट निस्किएको धुवाँ भैँसेपाटी क्षेत्र हुँदै उपत्यका प्रवेश गरेको छ। पानी नपर्ने र हावा नचल्ने कारणले यस्तो भएको हो।”
उनका अनुसार उपत्यकामा अहिले देखिएको अवस्था एकाएक उत्पन्न भएको भने होइन।
केही दिनदेखि वायुमण्डलमा रहेको प्रदूषणको मात्रा उच्चबिन्दुमा पुगेकाले अहिलेको अवस्था आएको पौडेलको भनाइ छ।
यस वर्ष नेपालको वन क्षेत्रमा लागेको डढेलो एक दशकयताकै उच्च भएको वन तथा भूसंरक्षण विभागका उपसचिव तथा डढेलोविज्ञ सुन्दरप्रसाद शर्माले बताएका छन्।
सातादिनमा एक पटक पनि पानी नपरे आगामी दुई महिनासम्म आगलागीको जोखिम उत्तिकै हुने भएकोले जङ्गलनजिकै भएका बस्तीहरू थप सचेत बन्नुपर्ने उनले बताए।
नेपालमा सामान्यतया चैत्रदेखि जेठसम्म बढी आगलागी हुने गर्छ। विभागको अनुगमन प्रणालीका अनुसार शुक्रवार ४७ जिल्लाका झन्डै ५०० स्थानमा डढेलो लागेको थियो।
जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अधिकारीका अनुसार शनिवार पनि मौसममा खासै सुधार आएको छैन।
विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाकी मौसमविद् गङ्गा नगरकोटीका अनुसार शनिवार पनि उपत्यकाको वायुमण्डल स्थिर रहेको छ।
“हावाको गति स्थिर रहेकाले भिजिबिलिटीको अवस्था आज (शनिवार) पनि उस्तै छ,” उनले भनिन्, “यो तुँवालो हट्नका लागि कि हावाको गति बढ्नुपर्छ कि त वर्षा नै हुनुपर्छ।”
विभागका अनुसार उपत्यकामा अझै दुई दिनसम्म यस्तै अवस्था रहन सक्ने देखिन्छ।
त्यसपछि पश्चिमी वायुको प्रभाव केही मात्रामा देखिने भए पनि त्यसले वर्षा गराउने सम्भावना न्यून रहेकाले पूर्ण रूपमा तुँवालो हट्न अझै केही दिन लाग्न सक्छ।
अहिलेको तुँवालो लाग्नुको एउटा कारण नेपालको दक्षिणी भेगमा लागेको डढेलो भए पनि त्यसबाहेकका कारणबारे अध्ययन नै गर्नुपर्ने मौसमविद् नगरकोटीले बताइन्।
वायु प्रदूषण बढेपछि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले शुक्रवार सबैलाई सावधानी अपनाउन आग्रह गरेको थियो।
मन्त्रालयले वक्तव्य जारी गर्दै सर्वसाधारणलाई स्वास्थ्यको ख्याल गर्न, घरबाहिर ननिस्किन, अनावश्यक रूपमा सवारीसाधन नचलाउन, फोहोर नचलाउन र धूलो र धुवाँ उत्पन्न हुनेखालका निर्माण कार्य नगर्न आग्रह गरेको छ।
चिकित्सकहरूका अनुसार काठमाण्डू उपत्यकामा अहिले देखिएको प्रदूषणका कारण सावधानी नअपनाएमा मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर खालका असरहरू पनि पर्न सक्छन्।
यो प्रदूषणले स्वास्थ्यमा कस्तो असर पार्छ?
तस्बिर स्रोत,GETTY CREATIVE
तस्बिर स्रोत,SCIENCE PHOTO LIBRARY
घरभित्र बस्दा पनि झ्याल र ढोका बन्द गर्न तथा धूप नबाल्न र धूमपान नगर्न ढकाल आग्रह गर्छन्। लागि फोक्सो बचाउन मास्क लगाए जस्तै चस्मा वा सनग्लास लगाउनु उपयुक्त हुन्छ।
त्यस्तै आँखा नमिच्ने र हात सफा गरिरहनु गर्नुपर्ने तथा सङ्क्रमण भएमा चिकित्सकको सल्लाहमा औषधि प्रयोग गर्नुपर्ने उनले बताइन्।- बिबिसीबाट